Lufthansa waxay duulimaadkeeda Antarctica ku tagtay duulimaadkeedii ugu badnaa ee 13,700-kilomitir
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Lufthansa waxay duulimaadkeeda Antarctica ku tagtay duulimaadkeedii ugu badnaa ee 13,700-kilomitir
Airlines • Aviation • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Safarka • Jarmalka Jebinta Wararka • News • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Airbus A350-900 ayaa duullimaadka ugu dheer ee aan joogsi lahayn ka duuli doonta taariikhda Lufthansa iyadoo la raacayo lambarka duulimaadka LH2574: 13,700 kiiloomitir oo ka bilaabanaya Hamburg ilaa saldhigga milateri ee Mount Pleasant ee Jasiiradaha Falkland
Axadda soo socota, Janaayo 31, Airbus A350-900 ayaa ka duuli doonta duulimaadkii ugu dheeraa ee aan joogsi lahayn ee taariikhda Lufthansa iyadoo la raacayo lambarka duulimaadka LH2574: 13,700 kiilomitir oo ka imanaya Hamburg ilaa saldhigga milateri ee Mount Pleasant ee Falkland Islands. 9:30 pm, waxay “diyaar u tahay duulimaad” 16 shaqaale ah iyo 92 rakaab ah. Duulimaadka 15-ka saacadood ah anigoo ka wakiil ah Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research (AWI) oo ku yaal Bremerhaven, waa saynisyahano iyo shaqaalaha markabka ee u safraya socdaalka soo socda markabka cilmi baarista ee Polarstern. A350-900 waxaa laga soo wareejin doonaa Frankfurt loona gudbin doonaa Hamburg galabnimada Axada. Imaanshaha garoonka diyaaradaha Hamburg waxaa loo qorsheeyay 4:30 pm iyadoo lagu raacayo lambar duulimaad LH9924. Diyaaradda Airbus oo diiwaangashan D-AIXP, oo sidata magaca magaalada Jarmalka ee Braunschweig, ayaa ku biirtay maraakiibta Lufthansa sanadkii hore. Waa mid ka mid ah diyaaradaha adduunka ugu waara uguna dhaqaalaha badan.
Maaddaama shuruudaha nadaafadda ee duulimaadkan ay aad u sarreeyaan, ayaa Lufthansa shaqaaluhu waxay karantiil galeen laba toddobaad ka hor iyaga iyo rakaabkii ku sugnaa huteel ku yaal Bremerhaven. Intii lagu gudajiray waqtigan, waxay kaqeybqaateen macluumaad macmal ah iyo barnaamij isboorti. Waxay dhameystireen 10,000-tallaabo oo tallaabo ah, oo ah fikradda shaqaalaha Lufthansa, si ay taam ugu noqdaan inta lagu jiro usbuuca ugu horreeya ee karantiil qolka. Intaa waxaa dheer, waxaa jiray bandhigyo ay soo bandhigeen saynisyahannada iyaga la safraya, kuwaas oo isla markiiba ay raaceen ku dhowaad dhowr boqol oo shaqaalaha Lufthansa ah.
Shaqaalaha iyo rakaabku waxay baska ka raaci doonaan Bremerhaven ilaa Hamburg maalinta Axada. Iyada oo leh fikrad nadaafadeed oo dhow, Madaarka Hamburg wuxuu hubin doonaa in la raaco xiriir la'aan. Meelaha Terminal-ka ee hadda shaqeynaya waxaa loo isticmaali doonaa in lagu caawiyo hubinta in xiriir aan lala yeelan karin socdaalayaasha kale aysan suurtagal ahayn. LH2574 sidoo kale waa duullimaad duubitaan ah oo garoonka diyaaradaha ah: waa duulimaadkii ugu dheeraa ee aan joogsi laheyn ee abid ka baxa Hamburg khaanadda.
Guud ahaan, u diyaargarowga duulimaadka qaaska ah ayaa aad u weyn. Waxay ku bilaabataa tababar dheeri ah duuliyeyaasha waxayna ku fidsantahay duulimaadyada elektaroonigga ah iyo jaantusyada soo degitaanka. Cunnada ayaa lagu rari doonaa diyaaradda Frankfurt mar hore. Laba shaqaale ayaa kula xiriiraya shaqaalaha Bremerhaven fiidiyow si ay u hubiyaan in dhammaan waxyaabaha lagama maarmaanka ahi ay saaran yihiin diyaaradda. Suurtagal noqon mayso in mar dambe dib loo raro. Intaas waxaa sii dheer, qalabka wax lagu nadiifiyo iyo kuwa wax ka nadiifiya ayaa ku safri doona duulimaadka, maadaama shaqaalaha maxalliga ah ee deegaanka aan loo oggoleyn inay raacaan diyaaradda ka dib markii ay ka degtay Jasiiradaha Falkland. Shaqaalaha Lufthansa sidaa darteed waxaa ku jira farsamo yaqaanno iyo shaqaale dhulka ka shaqeeya oo goobta ka shaqeeya isla markaana ku dayactira.
Si duulimaadku u noqdo mid raaxo leh, rakaabku waxay ku safraan Fasalka Ganacsiga iyo safafka Hurdada. Safka Hurdada, safaf kuraas ah oo ka tirsan Heerka Dhaqaalaha waxaa lagu qalabeeyaa furaash, buste iyo barkimooyin. A350-900 sidoo kale wuxuu leeyahay teknoolojiyad laydh ah si loogu taageero hurdada / habeenka. Duulimaadkan, tusaale ahaan, nalalka qolka waxaa loo qaabeeyey hab ah in farqiga waqtiga afarta saacadood ah uu kaliya u sababi doono dib u dhac yar oo jet ah.
Ka dib markay ka degaan Jasiiradaha Falkland, xubnaha safarka waxay kusii wadi doonaan safarkooda Antarctica markabka cilmi baarista ee Polarstern. Shuruudo sharci awgood ee jasiiradaha Falkland darteed, shaqaalaha markabka Lufthansa waxay mar labaad gali doonaan karantiil kadib markay soo degaan. Duulimaadka soo noqoshadu wuxuu tagi doonaa Febraayo 3 iyada oo la raacayo lambar duulimaad LH2575 oo ku wajahan Munich. Imaatinka Munich waxaa loo qorsheeyay Khamiista, Febraayo 4 markay tahay 2 pm Duulimaadkaan duulimaadka dib u noqoshada waxaa noqon doona shaqaalaha Polarstern, oo ka tagay Jarmalka December 20.